Julio Cesar, Nerón ary Augusto dia nanao fialamboly tamin'ny sarivongana hyper-realistic | Famoronana an-tserasera
Zanaka Julius Caesar, Augustus ary Nero ireo emperora 3 dia namboarina ho sary sokitra avy amina tanora mpanao sary sokitra izay nanome ny an'ity andiany ity ho Caesars of Rome. Ary ny marina dia afaka manintona ny mason'ny mpijery mijery ny antsipiriany sy ny mampiavaka ny sasany amin'ireo tarehy hitantsika tamin'ny sary vongana malaza sy sary vongana ireo.
Ny tetikasa dia teraka tamin'ny filàna fampisehoana tantara romana klasika tamin'ny fomba fijery olombelona sy maoderina kokoa. Miezaha hitondra ny tarehin-tsoratra ho an'ny tarehinao amin'ny asa izaye mahatratra ny hyperrealistic ary noho izany mamela anay gaga amin'ny fahaizany lehibe amin'ny antsipiriany. Ny marina dia ny fijerena ireo sary sokitra noforonin'ity mpanao sary sokitra Espaniola ity dia miteraka fahatsapana mifangaro.
Raha nilaza izy, miala tsiny fa tsy hitanay ny anarany Facebook y tranonkala, Césares de Roma dia mifantoka amin'ny maha-dokotera didaktika mba hanehoana kolontsaina klasika mifototra amin'ny fianarana ara-pientanam-po.
Julio Cesar no mpilalao manomboka ity fampirantiana an'ny sary sokitra vita amin'ny silikao ary izany dia mitondra ny mpijery mankany Roma kilasika manomboka amin'ny dingana farany amin'ny Repoblikan'i Roma ka hatramin'ny tarana-mpanjaka Julio-Claudius.
Sarivongana hyper-realistic hitondra ny fiainana amperora romana telo ahafahanao mahita ny ampahany amin'ny toetran'izy ireo ary mety ho diso hevitra momba ny antsipirian'ny antsipiriany manome ny zava-misy lehibe. Saika tsapanao io fofonaina io sy ny fomba ahatsapanao ny ampahany lava sy mahery kokoa amin'ny olona tsirairay.
Una andian-tsarimihetsika hyper-realistic izay vao voalohany manome lalana ny hafa marobe, araka ny nambaran'ny mpamorona azy avy amin'ny tranokalany. Mamela anao hahafanta-javatra izahay sary sokitra tsy misy sandry avy any Louvre, na ny hafa sary sokitra azo tanterahina avy amin'ny mpanoratra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny mpanao sary sokitra Espaniola dia mamorona amperora romana malaza amin'ny sary sokitra be loatra
Ny famolavolana toetra vaovao Sonic the Hedgehog dia mandrehitra ny tambajotra amin'ny fitsikerana